CFA vs. frm - ဘယ်အသိမှတ်ပြုလက်မှတ်သည် သာ. ကောင်း၏ဖြစ်ပါသည်? [It'saClose Call!]
frm vs CFA: ဘယ်အသိမှတ်ပြုလက်မှတ်သည် သာ. ကောင်း၏ဖြစ်ပါသည်?
23 သြဂုတ် frm vs CFA: ဘယ်အသိမှတ်ပြုလက်မှတ်သည် သာ. ကောင်း၏ဖြစ်ပါသည်?
Posted at 22:50h တွင် Alternate Articles အားဖြင့် Bryce Welker, တကြ် CPA0မှတ်ချက်များ
CFA သို့မဟုတ် frm သာ. ကောင်း၏သင့်အလုပ်ရှာဖွေရေးအဘို့ဖြစ်၏?
တစ်ဦး frm ကဘာလဲ?
frm vs CFA: လက်မှတ်လိုအပ်ချက်များ
frm vs CFA: အလုပ်ရှာဖွေရေး Path ကို
frm vs CFA: လက်မှတ်ကုန်ကျစရိတ်
frm vs CFA: လစာ
ဤသည်ကိုအများဆုံးမကြာခဏကျောင်းသားများကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းတဲ့အခါမှာဘဏ္ဍာရေး၎င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်များကိုတိုးစေရမည်ဟုမေးခွန်းများကိုမေးမွနျးတစျခုဖွစျသညျ. ယင်းအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်အသီးအသီးခက်ခဲအလုပ်တွေအများကြီးကြာသောကြောင့်သင့်ရွေးချယ်မှုကအရေးကြီးတယ်, ပိုက်ဆံနှင့်အချိန်. သငျသညျ၎င်းငျး၏သော့ချက်ကွဲပြားခြားနားမှုသတိထားမဟုတ်လျှင်ရွေးချယ်မှုခက်ခဲနိုင်ပါတယ်. အဆိုပါ CFA နှင့် frm အောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်အကြားအဓိကကွာခြားချက်ဖုံးလွှမ်းသောအကြောင်းအရာများဖြစ်ပါသည်. CFA ကော်ပိုရိတ်ဘဏ္ဍာရေးနှင့်တူဘဏ္ဍာရေးအတွက်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကိုဖုံး, အစုစုကိုစီမံခန့်ခွဲမှု, စာရင်းကိုင်, ပုံသေဝင်ငွေ, နှင့်အနကျအဓိပ်ပါယျ. သို့သော်ငြားလည်း, frm အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အထူးပြုဖြစ်ပါသည်. လည်း, CFA ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘဏ်လုပ်ငန်းအတွက်အလုပ်အကိုင်များများအတွက်ကောင်းစွာသင်ပြင်ဆင်, အစုစုကိုစီမံခန့်ခွဲမှု, ဘဏ္ဍာရေးသုတေသန. အဆိုပါ frm ဘဏ်များအတွက်အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ချင်သောသူတို့အဘို့သင့်တော်ပါတယ်, ဘဏ္ဍာတိုက်ဌာနသို့မဟုတ်အန္တရာယ်အကဲဖြတ်အတွက်.
CFA Chartered ဘဏ်ဟာ Financial Analyst များအတွက်ရပ်တည်နှင့် CFA Institute မှတဆင့်ရရှိခဲ့တဲ့လက်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်. CFAs ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အထူးကုများမှာ. CFAs အားဖြင့်ကျင်းပတချို့ကလူကြိုက်များအလုပ်ခေါင်းစဉ်အစုစုကိုမန်နေဂျာကပါဝင်သည်, သုတေသနလေ့လာဆန်းစစ်, နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်. သူတို့ကအစကော်ပိုရိတ်ဘဏ္ဍာရေးအတွက်အလုပ်လုပ်လေ့.
frm အတိုကောက် ဘဏ္ဍာရေးအန္တရာယ် Manager က နှင့်အန္တရာယ်ပညာရှင်များ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Association ကကမ်းလှမ်းခဲ့သည်တစ်ဦးလက်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်. GARP နှင့် frm လက်မှတ်နိုင်ငံတကာကအသိအမှတ်ပြုနေကြ. FRMs အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့အန္တရာယ်အကဲဖြတ်ရန်နှင့် minimize သို့မဟုတ် offset မှမဟာဗျူဟာများဖွံ့ဖြိုး. သူတို့ကဘဏ်လုပ်ငန်းများတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်တွေ့နိုင်ပါသည်, ကော်ပိုရေးရှင်း, ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုကုမ္ပဏီများ, နှင့်အစိုးရ.
တစ်ဦး CFA ဖြစ်လာနိုင်ရန်အတွက်, သင် CFA Institute ကကကမ်းလှမ်းလက်မှတ်အစီအစဉ်တွင်စာရင်းသွင်းရမယ်. အဆိုပါအစီအစဉ်တွင်စာရင်းသွင်းရန်, သငျသညျပညာရေး / လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတစ်ခုလေးနှစ်ဒီဂရီသို့မဟုတ်ပေါင်းစပ်လိုအပ်ပါတယ်, အောက်ပါအကြောင်းအရာများဖုံးအုပ်သုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းစာမေးပွဲ:
ဒါဟာခန့်ကြာ 300 အဆိုပါ CFA စာမေးပွဲဖြေဆိုတစ်ဦးချင်းစီအဆင့်ကိုသွားလေ့လာမှုအချိန်နာရီ. လည်း, ပဋိညာဉ်စာတမ်းကိုလက်ခံရရှိရန်, သင်တစ်ဦး CFA အောက်မှာဆက်စပ်အလုပ်အတွေ့အကြုံ၏လေးနှစ်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်. သငျသညျကိုလညျး CFA Institute ၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာရမယ်.
သင်တစ်ဦး frm ဖြစ်လာချင်တယ်ဆိုရင်, သငျသညျအန္တရာယ်ပညာရှင်များ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Association ကအုပ်ချုပ်နှစ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းစာမေးပွဲရမယ် (GARP) အောက်ပါအကြောင်းအရာများကိုဖုံးအုပ်ထား:
ဒါဟာပုံမှန်အားအနည်းဆုံး frm ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကြာ 150 နာရီတစ်ဦးချင်းစီစာမေးပွဲတွင်အဆင့်လေ့လာရန်နှင့် GARP ယူ FRMs အားပေး 40 ဆက်လက်ပညာရေးနာရီတိုင်းနှစ်နှစ်. အဆိုပါ GARP ဆိုတိကျတဲ့လေးနှစ်ဒီဂရီလိုအပ်ချက်သို့မဟုတ်အကြွေးနာရီနိမ့်ဆုံးအရေအတွက်မခေါ်ပါဘူးနေစဉ်, အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အလုပ်အကိုင်အကိုင်ဖို့ကဘွဲ့တစ်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်. လက်မှတ်တစ်ခုခုကိုရရှိရန်, လေ့လာမှုနှင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုပြင်ဆင်မှုအတွက်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအချိန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ပြင်ဆင်ထားဖြစ်.
CFAs ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ကျယ်ပြန့်လေ့လာမှုများနှင့်ကျွမ်းကျင်မှု၏ FRMs ထက်ပိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများရှိသည်ပုံမှန်ဒါဟာင်, အထူးသဖြင့်စီမံခန့်ခွဲမှုရာထူးအတွက်. CFAs တစ်ကုမ္ပဏီတခုရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ပူးတွဲတင်ပြထားအတွက်အထူးပြု, သောကျယ်ပြန့်ပိုက်ကွန်ကိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာကိုနှင်ထုတ်နိုင်ပါတယ်. CFAs ပုံမှန်အားဖြင့်စောင်ရန်းကိုရန်ပုံငွေအတွက်အလုပ်လုပ်, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘဏ်များ, နှင့်ကော်ပိုရိတ်ဘဏ္ဍာရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘဏ်လုပ်ငန်းလုပ်နေတာ, အစုစုကိုစီမံခန့်ခွဲမှု, နှင့်ရှယ်ယာသုတေသန. သို့သော်ငြားလည်း, FRMs အန္တရာယ်ကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်အစုစုအတွင်းက minimize လုပ်ဖို့နည်းလမ်းတွေထွက်ရှာဖွေအပေါ်အာရုံစိုက်ပိုပြီးအထူးပြုများမှာ. FRMs ပုံမှန်အားဖြင့်အန္တရာယ်နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအန္တရာယ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်တဲ့သူစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အလုပ်အမှုဆောင်အဆင့်ရာထူးကိုင်.
အဆိုပါ CFA စာမေးပွဲဖြေဆို တစ်ဦးတည်းအချိန် program ကိုကျောင်းအပ်ကြေးရှိပါတယ် $450. တစ်ဦးချင်းစီအဆင့်စုစုပေါင်းစာမေးပွဲဖြေဆိုအခကြေးငွေပုံမှန်အားဖြင့်ကုန်ကျ $930. CFA ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများဆပ်ဖို့မြျှောလငျ့နိုငျ $1,100 သို့ $1,700 ၎င်းတို့၏ပဋိညာဉ်စာတမ်းရယူရန်. အဆိုပါ frm စာမေးပွဲတွင်ယူ, သင်တစ်ဦးပေးချေရန်မလိုအပ် $400 တစ်ဦးချင်းစီစာမေးပွဲများ၏ကုန်ကျစရိတ်အပြင်ကျောင်းအပ်ကြေး. အပိုင်းငါကုန်ကျစရိတ် $875 နှင့်အပိုင်း II ကိုကုန်ကျစရိတ် $475. သငျသညျဆပ်ဖို့မြျှောလငျ့နိုငျ $1,050 သို့ $1,500 တစ်ဦး frm ဖြစ်လာဖို့. နှစ်ဦးစလုံးစာမေးပွဲဖြေဘို့နှုန်းထားများထဲမှာရှိပါတယ်ဖြတ်သွား 40 ရာခိုင်နှုန်းခန့်အကွာအဝေး.
မည်သည့်အလုပ်အကိုင်များအတွက်လစာအလုပ်ခေါင်းစဉ်အပေါ်မူတည်, အတွေ့အကြုံအနှစ်, နှင့်တည်နေရာ. CFAs အကြားတစ်ဦးလစာဝင်ငွေနိုင်ပါတယ် $45,000 နှင့် $180,000 တစ်နှစ်လျှင်သူတို့ရဲ့အနေအထားပေါ် မူတည်., အတှေ့အကွုံ, နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်း. အဆိုပါ frm လစာအကွာအဝေးဟာ CFA လစာအကွာအဝေးရန်အလွန်ဆင်တူသည်. FRMs ပုံမှန်အားဖြင့်ဝင်ငွေ $50,000 သို့ $165,000.
နှစ်ဦးစလုံးပုံစံအညီအမျှလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်လေးစားခြင်းနှင့်မတဦးတည်းကအခြားထက် သာ. ကောင်း၏နေကြတယ်. သူတို့ကရိုးရှင်းစွာကွဲပြားခြားနားကြသည်. အဆိုပါ CFA သတ်မှတ်ရေးနယ်ပယ်များတွင်ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအပေါ်အကြီးအကျယ်အာရုံစူးစိုက်နေစဉ်, အဆိုပါ frm အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏အန္တရာယ်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲခြင်းအတွက်အထူး. နှစ်ခုအကြားသင့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်သင်၏စိတ်ဝင်စားမှုမုသာမသုံးခြင်းနှင့်သင်ပိုမိုလုပ်နေတာပျော်မွေ့သောအရာကိုအဘယ်အရပ်အပေါ်လုံးဝမှီခိုဖြစ်ပါသည်. သင်နှင့်ပတ်သက်ပြီးပိုမိုလေ့လာလိုပါက အကောင်းဆုံး CFA prep သင်တန်းများ you can go here. သငျသညျနှစ်ဦးစလုံးရှိတယ်လို့မရပါဘူးဘာကြောင့်အဘယ်သူမျှမအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်. ဒါဟာအားလုံးသင်သည်သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်အတူလုပ်ချင်သောအရာကိုအပေါ်မူတည်. တစ်ဦး CFA နှစ်ဦးစလုံးရှိခြင်းများအတွက်အများဆုံးယုတ္တိမြင်ကွင်းနှင့် frm လက်မှတ်ပေးခြင်း is if you areaCFA and would like to specialize in risk management. သတိရ, အဆိုပါ frm သတ်မှတ်ရေးအတွက် CFA ထက်လမ်းကိုပိုပြီးအထူးပြုဖြစ်ပါသည်. ဒါကြောင့်, ဒါကြောင့်နှစ်ဦးစလုံးရှိသည်ဖို့အကျိုးရှိဖြစ်နိုင်ပါတယ်. ငါသင်သည်သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်အတူလုပ်ချင်သောအရာကိုမှာကြည့်အကြံပြုနှင့်တစ်ကောက်မယ်လို့. ထိုအခါသင်သည်သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း start ပြီးနောက်, ဒါကြောင့်အခြားတစ်ဦးကိုလိုက်ရန်အကျိုးရှိသောပါလိမ့်မယ်လျှင်သင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်.
ထိပ်တန်း frm သင်တန်းများနှိုငျးယှဉျ
အကောင်းဆုံး CFA Coursess နှိုငျးယှဉျ
အကောင်းဆုံးဘား့ Prep သင်တန်းများ
ထိပ်တန်း 25 San Diego Accounting Firms
ထိပ်တန်း 17 Best Gifts for Accountants